Madaxweyne Shariif Oo Qaabilay Wafdi Ka Sacday Kenya
» Gendershe » Hamarey » Hiiraan » Himilo Online
April 22, 2012 Markacadeey
Madaxweynaha dowladda federaalka KMG ah ee Soomaaliya ayaa maanta Xafiiskiisa ku qaabilay ku xigeenka wasiirka arrimaha dibadda Kenya oo maanta Booqasho ku yimid Muqdisho iyadoo wasaaradda arrimaha dibadda Keyna Shaacisay in ay safaaradeeda dhaqso uga furaneyso Muqdisho.
Kadib markii uu wasiir ku xigeenka wsaaaradda arrimaha dibadda dowladda Kenya Mr Richard Onyonga maanta booqasho ku yimid Muqdisho ayaa waxa Garoonka diyaaradaha Aadan Cadde si diirran ugu soo dhoweeyay mas’uuliyiin ka Tirsan wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya kuwaas oo uu horkacayay wasiir Ku xigeenka wasaradda arrimaha dibadda Dr. C/Nuur Sheekh Ibraahim iyo xubno Kale, waxaana loo soo gelbiyay xarunta madaxtooyada Qaranka.
Madaxweynaha shariif ayaa xarunta villa Soomaaliya ku qaabilay wasiir ku Xigeenka arrimaha dibadda Kenya iyadoo kulankaasina ahaa mid ay albaabada u Laabnaayeen.
Markii uu kulanka soo idlaaday kadib ayaa waxaa warbaahinta dowladda la hadlay Richard Onyonga wasiir ku xigeenka arrimaha dibadda Kenya, isagoo tilmaamay in Madaxweynaha uu kala hadlay arimo ku saabsan xaaladda dalka islamarkaana Dowladda Kenya diyaar u tahay in ay sidaa ugu dhaqsaha badan safaaradeeda uga Furato caasimadda.
Hora ayaa booqasho sidaan oo kale waxaa Muqdisho ku yimid wafdi uu Hogaaminayay wasiirka arrimaha dibadda Kenya musas watangula kuwaas oo Wadahadallo ku saabsan sidii la isaga kaashan lahaa dagaalka shabaab la yeeshay Madaxda dowladda Soomaaliya uu ugu horeeyo madaxweyne Sheekh Shariif Sheekh Axmed.